Ungazijonga njani iividiyo zeYouTube kwiWindows Window? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungazibukela njani iividiyo zewindows kwiwindows edadayo?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 292
Abasebenzisi beqonga leYouTube ngoku unokukhetha ukubukela iividiyo zesicelo kwiwindows edadayo. Ukuba ufuna ukufunda ukuba ungayenza njani, siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo apho siza kukufundisa amanye amaqhinga ekufuneka uwasebenzisile ukufezekisa injongo.
Ukubukela iividiyo ze-YouTube kwiwindows edadayo ngoku kunokwenzeka Enkosi ngobuqhetseba esikuzisele bona. Uya kudinga esinye isicelo semiyalezo esaziwa njengeTelegram. Eminye iya kuba lula ukuyenza.
Sebenzisa iTelegram ukubukela iividiyo zeYouTube
Yocingo iye yaba ngomnye izicelo zemiyalezo kwangoko ezaziwa kakhulu kwihlabathi liphela. Abasebenzisi abaninzi bayayisebenzisa, ikakhulu ngenxa yeempawu ezintle kunye nezixhobo ezibonelelayo. Enye yezinto ezininzi esinokuyenza ngale app kukubukela iividiyo zeYouTube kwifestile edadayo.
Ngaphambi kokuchaza amanyathelo ekufuneka uwalandele ukubukela iividiyo zeYouTube kwifestile edadayo, kubalulekile ukucacisa ukuba esi sixhobo kufuneka sisebenze Kuyimfuneko ukuba nohlobo lwamva lweTelegram olufakelweyo kwisixhobo sethu esiphathwayo. Ngaphandle koko kuya kuba nzima ukuyiphumeza.
Amanyathelo wokubukela iividiyo zewindows kwiwindows ejikelezayo
Sifumana eyona nto inomdla kuthi kwaye oko kukwazi amanyathelo ekufuneka siwalandele ukuze sikwazi ukubukela iividiyo ze-YouTube kwiwindows edadayo. Into yokuqala esiza kuyidinga kukufikelela kwiqonga leYouTube kwiselfowuni okanye kwikhompyuter.
Ukuba ufuna ukubona ividiyo ye-Youtube kwiwindows edadayo into yokuqala iya kuba kukufikelela kwiqonga levidiyo elidumileyo kusasazo. Ungayenza kwisicelo esifakwe kwifowuni yakho okanye ngqo kwisikhangeli sekhompyuter yakho.
Khangela ividiyo ofuna ukuyivula kwifestile edadayo
Emva kokuba kwiqonga le-YouTube, inyathelo elilandelayo liya kuba beka ividiyo esifuna ukuyivula kwifestile edadayo. Into yokuqala iya kuba kukukhangela ibha kwaye apho ubhale igama levidiyo kwaye ukhethe ukhetho oluchanekileyo.
Ngaba sele unayo ividiyo ekhethiweyo? Ngoku kufuneka ucofe kwiqhosha "share" elivela ezantsi kumdlali. Emva koko ukhethe uphawu lweTelegram ukuze wabelane ngevidiyo kunye nesicelo.
Emva kokuthumela ikhonkco levidiyo kwiTelegram i-thumbnail yevidiyo iya kuvela kwiscreen. Konke ekufuneka sikwenzile kukucinezela loo mfanekiso, hayi i-ULR kuphela.
Ividiyo iya kuvulwa ngokuzenzekelayo
Emva kokucofa kwi-thumbnail yevidiyo izakuqala ngokuzenzekelayo ukudlala. Apha ngezantsi kuya kuvela iindlela ezininzi, kufuneka ukhethe enye ecaleni kwe icon "ikopi"
Yenza ifestile edadayo
Ilungile. Siza kubona ukuba ifestile yevidiyo edadayo yenziwe njani kwiTelegram. Ngoku ungasa le window naphina eskrinini. Ukuba ufuna ukuyisusa, konke okufuneka ukwenze kukuswayipha kwelinye icala lesikrini ngokukhawuleza kwaye kuya kuthi shwaka.
1 Sebenzisa iTelegram ukubukela iividiyo zeYouTube
2 Amanyathelo wokubukela iividiyo zewindows kwiwindows ejikelezayo
2.1 Vula i-YouTube
2.2 Khangela ividiyo ofuna ukuyivula kwifestile edadayo
2.3 Cofa ekwabelaneni
2.4 Thumela ividiyo
2.5 Ividiyo iya kuvulwa ngokuzenzekelayo
2.6 Yenza ifestile edadayo
Uyenza njani ipini kwiPinterest?
Ungayinqanda njani kwi-Twitter?